Xariir: Xogta iyo waraaqaha isweydaarsiga u beddelo Muuqaallo la daabacay | Martech Zone
Weligaa waligaa ma laheyd warqad xaashiyeed oo uruurisay xog aad u qurux badan oo aad kaliya dooneysay inaad aragto - laakiin tijaabinta iyo qaabeynta jaantusyada ku dhex jira gudaha Excel ayaa aad u dhib badnaa oo waqti badan ku qaadanayay? Kawaran haddii aad dooneysid inaad ku darto xog, maareeyso, geliso oo xitaa aad wadaagto muuqaaladaas?
Waad la socon kartaa Silk. Xariirku waa madal daabacaad xog ah.
Xariirradu waxay ka kooban yihiin xog ku saabsan mowduuc gaar ah. Qof kastaa wuu baari karaa Xariir si uu u baadho xogta una abuuro jaantusyo is-dhexgal qurux badan, khariidado iyo bogagga shabakadda. Ilaa maanta, malaayiin bog oo xariir ah ayaa la sameeyay.
Waa tan Tusaale
Booqo 15ka Shabakadood ee ugu waa weyn bulshada Xariir si aad u eegto, u wadaagto ama xitaa u dhex gasho muuqaalada laga sameeyay ururinta xogtan. Waa kuwan gundhigga tooska ah ee shaxda baarka ee tirakoobka isticmaalaha:
Xogta ka timid shabakadda-bulshada-weyn.silk.co
Ka dhig dukumiintiyada is dhexgal - Halkii aad ka diri lahayd PDF-yada taagan, waraaqaha isweydaarsiga ama xiriiriyeyaasha ka socda Google Docs, isticmaal Silk si aad u sameyso degel is dhexgal ah oo ka qeyb qaadanaya dadka isticmaala kuna dhiirrigeliya inay ku ciyaaraan xogtaada
Dhexgal xogta is-dhexgalka meel kasta - Qaado aragtidaada Xariirta oo u isticmaal dhammaan shabakadda. Ku dheji iyaga Tumblr, WordPress, iyo barnaamijyo kale oo daabacan.
Kudar sumadaha si aad uga dhigto shaqadaada mid lagu kala sooci karo dhexdhexaad, qaab, ama nooc kasta oo aad doorato. Ku darista xogta goobta, sidoo kale waad dhisi kartaa khariidado.
Si loo dhigo Silk in la isticmaalo, waxaan ka dhoofiyey darajooyinkeena keyword Xeebaha oo si dhakhso leh u dhistay muuqaal ah oo ii oggolaanaya inaan kala-sooco oo aan eego ereyada muhiimka ah ee aan ku lahaa darajooyin sare oo ay jiraan tan oo ah mugga raadinta… asal ahaan ii ogeysiinaya halka xoogaa hagaajinta iyo dhiirrigelintu ay kaxeyn karaan taraafikada badan. Tan waxaan ku samayn karay anigoo kala shaandheeynaya oo kala shaandheeynaya xogta u laakiin muuqaalaynta ayaa hubaal ka dhigtay inay si weyn u muuqato
Tags: daabacaadda xogtamadal daabacaadda xogtaMuujinta Xogtamadal muuqaalaynta xogtasilcxariir
Sababta iyo Sida Loo Sameeyo Akoon Gravatar ah
Xirfadleyda Warbaahinta Bulshadda Xaqiiqda Ma Maamuli Karaan